မြစ်ဆုံ: ဗိုလ်ချုပ် ဒို.ဖခင် ( ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ.ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုလျှက်)
ဗိုလ်ချုပ် ဒို.ဖခင် ( ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ.ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုလျှက်)
ရှေ့နေဦးဖာ သား
့ကြံ့ ကြံ ခိုင်တဲ့ ဇာနည်ဘွား
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းသင်ခန်းစာထည်းမှာ သင်ခဲ.ရတဲ. ဗိုလ်ချုပ်ကဗျာလေးပါ။ ဘယ်တော.မှ မေ.လိုမရတဲ. ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ.လေးမှာ အားလုံးဘဲ သတိရစေဖို.မျှဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို. လူငယ်တွေ အများစုသည် ဖေဖော်ဝါရီ (14 ) ရက် ချစ်သူများနေ.ကိုတော. မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေကြပေမယ်. ဖေဖော်ဝါရီ (13) ရက် လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး၏ မွေးနေ.ကိုတော. အများစုက မေ.နေကြတာကို တွေ.နေရတာတော. အင်မတန်မှ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံမှ မတိကျ မသေချာတဲ. ရာဇ၀င်လေး တစ်ပုဒ်ကြောင်. ဖြစ်လာရတဲ. ချစ်သူများနေ.ကိုတော. ဖော်ကျူးထုတ်ဖော်နေကြပေမယ်. ဗိုလ်ချူပ် အောင်ဆန်းလို. တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိနေကြတဲ. မြန်မာ.အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးကို မွေးထုတ်ပေးခဲ.တဲ. နေ.ကိုတော. ဖော်ကျူးစပ်ဆိုတာတွေ ဂုဏ်ပြုတာတွေ အရမ်းကို နည်းပါးတာကိုတွေ.နေရသည်။
ငါတို.မြန်မာပြည် မိဘတိုင်းကကွယ် ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို သူရဲကောင်းတွေ မွေးရမယ်
ဆိုပေမယ်. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းမှာ နောက်ဘယ်တော.မှ မရှိလာနိုင်တဲ. တစ်ယောက်တည်းသော သူဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်.ဘ၀အတွက် စံနမူနာပြ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ် ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကို ဒေါင်.မျိုးစုံ အမြင်မျိုးစုံတွေကနေ ရေးထားတဲ. စာအုပ်တွေ ကျွန်တော်.စာအုပ်စင်မှာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်တော.ဖတ်ဖတ်
မငြီးငွေ. စေတဲ. စာအုပ်တွေပါ။
ဒီနေ.ထူး နေ.မြတ်လေးကို မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံး မမေ.စေဖို. ကျွန်တော်တို.အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ငါ့ကိုအထင်မကြီးပါနဲ့ ငါ့ကိုအတုယူပါ။ တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပါ ဘာသာကိုမြတ်နိုးပါ လူမျိုးကိုလေးစားပါ အစဉ်အလာကိုထိမ်းသိမ်းပါ။။(ဗိုလ်ချုပ်)
မှတ်ချက်။ ဗိုလ်ချုပ်မိန်.ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်များ ၊ ကဗျာများ ၊ ဓါတ်ပုံများကို credit ပေးရန်ပျက်ကွက်သည်ကို နားလည်ခွင်.လွှတ်ပေးပါရန်။
Posted by မောင်မောင် at 15:15
ထပ်တူထပ်မျှ ဂုဏ်ပြုကြိုဆို လျှက်ပါပဲ မောင်လေးရေ..
ကျေးဇူးပါပဲအစ်ကိုကြီးရေ.. လေးစားကြည်ညိုစွာ ဖတ်ရှုမှတ်သားသွားပါတယ်ခင်ဗျ
ကျေးဇူးကမ္ဘာပါပဲ အစ်ကိုရေ။ အမှန်လည်း မေ့နေမိတာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းပြန်ဖတ်မိတိုင်း ဝမ်းနည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီခေတ်ကလေးတွေဆို ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ကို မသိတော့ဘူး..ချစ်သူများနေ့ ကိုပဲ သိတာ...
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မမေ့မလျော့ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုနေပါတယ် မောင်မောင်ရေ။
13 ရက်ထက် 14ရက်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာများတယ်